प्रदेश ६ को विकासको मुख्य... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता सुर्खेत, फागुन १
राजनीतिक दलका नेता,सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाले प्रदेश ६ को समृद्धिको आधार पर्यटनलाई बनाउने बताएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मनघरी फाउण्डेशन नेपालको आयोजना र उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश नं. ६ को सहयोगमा आयोजित ‘प्रदेश ६ को पर्यटन विकासमा अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
उनीहरुले पर्यटन विकासका लागि प्रदेश ६ का पर्यटकीय गन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनचेतना अभिवृद्धि, सकरात्मक सोच र व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याए।
प्रदेश ६ का पर्यटकीय गन्तव्य रारा, शे फोक्सुण्डो, छायाँनाथ, काक्रेविहार, बुलबुले, पञ्चकोशी, हिल्सालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माण कम भएको तथा व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेकोले प्रदेश सरकारले जोड दिने माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले प्रदेश ६ मा पर्यटकहरुको तथ्यांक समेत नभएकोले पहिला होटल, पर्यटकको लगत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदेश ६ मा पर्यटन विकासको आधार नै बनि नसकेकोले प्रदेशसभाले पहिला आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ६ का संयोजक पदम शाहीले पर्यटन विकासका लागि वीरेन्द्रनगरमा विमानस्थलको स्तरोन्नति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे। त्यसैगरी, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका थिए।
विरेन्द्र नगर नगरपालिका प्रमुख देव सुवेदीले समग्र प्रदेश न ६ को पर्यटन गुरुयोजना आवश्यक छ। पर्यटककालाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता तयार गर्न जरुरी छ।
सुर्खेतको काक्रेविहारदेखि मानसरोवरसम्मको गुरूयोजना बनाउन जरुरी छ। समग्र पर्यटन विकासका लागि मात्र नभएर सरकारको नीति नै परिवर्तन जरुरी छ। त्यस्तै मनघरी फाउण्डेशन सल्लाहकार डा. रवीन खड्काले पर्यटनका अथाह सम्भावना रहेको भन्दै यसको उचित लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिए।
मनघरी फाउण्डेशनका अध्यक्ष भरतबन्धु थापाले प्रदेश नम्बर ६को समृद्धीको आधार पर्यटन र जडीबुडी नै भएकाले यस तर्फ सबै एक जुट हुन आव्हान गरे।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १, २०७४, ०४:००:५६